Home News R/Wasaare Kheyre iyo Safarkii Imaaraaka Maxaa ka dhacay? Akhriso
R/Wasaare Kheyre iyo Safarkii Imaaraaka Maxaa ka dhacay? Akhriso
R/Wasare Xasan Cali Kheyre oo booqasho ku jooga dalka Imaraadka ayaa waxay wafdigiisa madaxtooyada Somaliya ku soo dartay Cabdsiciid iyo Balbal oo labaduba ah gacanyarayaasha madaxweynaha iyo adeegayaasha Fahad yasiin ah. Sida MO horay u sheegtay booqashadaan waxaa hareeyey ismaandhaaf ka yimid Madaxweynaha, Fahad iyo Kheyre, waxaana ugu dambeyntii lagu heshiiyey inuu kheyre baxo laakiin laga warqabo waxa uu sameynayo.
Haddaba shalay ayuu Xamar ka raacay dayuurad kira ah waxaanu xalay ku hoyday Abu Dhabi, hasa yeeshee sidii la filayey ayaa waxaa la soo sheegaya in R/wasaare Xasan Cali Kheyre uu kulamadii uga dhuuntay wafdiga intiisii kale. Kheyre ayaa kulamo gaar ah oo kaligiisa ah la yeeshay Cali Shamsi oo ah Wasiirka Amniga Dibadda ee Dawlada Imaaraadka, ahna gacanta midig ee Maxamad Bib Zayid. Kheyre ayaa lagu wadaa in uu la kulmo Maxamad Bin Zayid waa hadii kulanka Cali Shamsi iyo Kheyre uu isfahan dhaliyo.
Safarka Kheyre ayaa in mudo ay u xayirnaa isfaham la’aan ka dhexjirtay Kheyre, Fahad iyo Farmaajo oo la xaririta sababta loogu safrayo Imaaradka. Kheyre ayaa ku dooday in hadii ay Imaaraadka isfahmi waayaan uu mucaarad xoog leh uga imaan karo, halka Farmaajo iyo Fahad ay ku doodeen in Madaxweyne Farmaajo uu sedex jeer la kulmay Imaaraadka wax natiijo ahna ka keeni waayey, sidaas daraadeedna aysan jirin wax uu Kheyre ka keenayo.
Imaaraadka waxaa ka go’an in Farmaajo iyo dawladda Somaliya laga reebo Qatar oo la hoos keeno Xulafada Sacuudiga, si Qatar loogu cusleyo go’doominta. Arrintaan oo la jaanqadeysa arrin kale oo uu in mudda ahba ka shaqeynayey wakiilka bariga Afrika ee EU Mr Randos ayaa Imaaraadka looga codsaday inay bixiyaan kharashka ku baxa AMISOM oo lacagta loo hayaa ay ku egatahy bartamaha Sannadkaan. Imaaraadkuna waxay ku xereen shuruudo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay in Qatar dayuuradaheeda Somaliya kormaraa la joojiyo, inay hogaanka Sare ee AMISOM Imaaraadka ka qeyb galaan iyo In Turkiga xiriirkiisa hoos loo dhigo, isla markaana wadahalka “Somaliland” loo raro Swizerland oo ah dalkii kala gooyey Dalka Sudan. Farmaajo waxaa u dan ah inuu korsiga sii joogo waxaana laga yabaa inuu aqbalo intaan oo dhan.